जीवन बीमा कम्पनीहरुद्वारा ४१ अर्ब बढी प्रथम बीमाशुल्क आर्जन, कुनको कति ? Beema Patrika
जीवन बीमा कम्पनीहरुद्वारा ४१ अर्ब बढी प्रथम बीमाशुल्क आर्जन, कुनको कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को चौथो त्रैमासको अन्त्यसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरुले ४१ अर्ब बढी प्रथम बीमाशुल्क आर्जन गरेको छन् । यो अवधिसम्म १९ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुले ४१ अर्ब ९७ करोड प्रथम बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएका हुन् ।
चौथो त्रैमासको अन्त्यसम्ममा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले सबैभन्दा धेरै प्रथम बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । नेपाल लाइफले यो अवधिसम्ममा ८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । यस्तै सूचीको दोस्रो स्थानमा नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ । नेशनल लाइफले एलआईसी नेपाललाई उछिन्दै दोस्रो स्थान हासिल र्ग सफल भएको हो । कम्पनी यो अवधिसम्ममा ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएको छ । तेस्रो स्थानमा झरेको एलआईसी नेपालले ३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँका साथ यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी सूचीको चौथो स्थानमा रहेको छ । पाचौँ स्थानमा रहेको रिलायबल नेपाल लाइफले २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ ।
यस्तै एशियन लाइफले २ अर्ब १३ करोड, सिटिजन लाइफ २ अर्ब २ करोड, सूर्या लाइफ २ अर्ब १ करोड, ज्योपि लाइफ १ अर्ब ८४ करोड, गुराँस लाइफ १ अर्ब ६८ करोड, आइएमई लाइफ १ अर्ब ५९ लाख, रिलायन्स लाइफ १ अर्ब ४८ करोड, मेट लाइफ १ अर्ब ४५ करोड, प्राइम लाइफ १ अर्ब ३८ करोड र सानिमा लाइफले १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमाुशल्क आर्जन गरेका छन् ।
चौथो त्रैमासको अन्त्यसम्ममा सन नेपाल लाइफले ९१ करोड, प्रभु लाइफ ८९ करोड, राष्ट्रिय बीमा संस्थान ७६ करोड र महालक्ष्मी लाइफले ७५ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएका छन् ।
ज्योति लाइफले जीवन बीमा अभिकर्ता आधारभूत तालिम सञ्चालन गर्ने
रिलायबल नेपाल लाइफद्वारा रु.१४ लाख मृत्यु दाबी भुक्तानी
रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्सले प्रतिकित्ता रु.२१२ मा आईपीओ निष्कासन गर्न बोर्डसँग माग्यो अनुमति
सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सको आईपीओमा बिक्री आवेदन खुला, कहिलेसम्म दिन पाइन्छ आवेदन ?
सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सले भोलिदेखि आईपीओ निष्कासन गर्ने
एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सद्वारा मृत्यु दाबी भुक्तानी